UNWTO: Ny fizahan-tany Snow sy Mountain dia miatrika ny fanamby amin'ny fampifanarahana ny fanovana
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » UNWTO: Ny fizahan-tany Snow sy Mountain dia miatrika ny fanamby amin'ny fampifanarahana ny fanovana
Ny Kongresy Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany Snow sy Mountain (Andorra, 10-21 martsa 23) faha-2018 dia nanasongadina ny filàna mampifanaraka ny toeran'ny fizahan-tany amin'ny zavatra andrasan'ny mpanjifa ankehitriny sy ny fampitomboana ny kalitaon'ny traikefa ananan'ilay mpandeha, sady famaritana ny fitantanana fahalalana sy ny kolontsaina mampiantrano vahiny ho fanalahidy. amin'ny fahombiazana.
Narindra niarahan'ireo kaomina fito an'ny Principality, ny Governemanta Andorra ary ny World Tourism Organisation (UNWTO), ity Kongresy ity dia mivondrona ho adihevitra maharitra momba ny fampandrosoana sy ny faharetan'ny fizahantany any amin'ny faritra be tendrombohitra.
Mpandray anjara maherin'ny 400 no nanatrika ny famoahana ny kaongresy fanontana fahafolo, nahitana mpandahateny telopolo teo ho eo avy amin'ny firenena 16 sy manam-pahaizana avy any Espana, Etazonia, Failandy, France, Greece, Japan, United Kingdom ary Switzerland, ankoatry ny maro hafa.
Tamin'ny famaranana ny Kaongresy, ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia nanamafy ny maha-zava-dehibe ireo toerana itodiana any an-tendrombohitra fa tsy ny valin'ny fitakiana miovaova ataon'ny mpandeha ihany, fa koa ny fandrakofana ireo faritra izay miainga amin'ny “filàna fananganana fotodrafitrasa sy trano maharitra, kalitao. fampiofanana matihanina, ary koa ny ady amin'ny vanim-potoana sy fanamafisana ny loharanon-karena ”.
Ho famaranana ny dinika tao anatin'ny telo andro, nanasongadina ireo lafiny izay tokony hanamarika ny tondrozotra harahina amin'ity fizahan-tany fizahan-tany ity ireo manam-pahaizana:
• Ny sehatry ny fizahan-tany dia nivoaka tamin'ny krizy nahatratra mpizahatany marobe sy famatsian-toerana fizahan-tany ary mandray ny dingana ilaina mba hikarakarana ny mombamomba ny mpanjifa izay mitaky fangatahana sy za-draharaha kokoa.
• Ny nomerika sy ny fanatontoloana dia namorona mpizahatany manana fahazarana sy fanantenana tsy mitovy amin'ny an'ny mpitsidika nentim-paharazana, ka mila vokatra mifanaraka amin'ny fanovana andrasana amin'ny lafiny fangatahana.
• Ny lafiny sasany amin'ny lafin'ny famatsiana dia tsy maintsy manatsara hatrany, amin'ny fitadidiana fa ny kalitaon'ny zava-niainan'ny mpitsidika dia tokony ho ny ivon'ity fivoarana ity.
• Ny fahafaha-manolotra trano fandraisam-bahiny, tehezan-ski sy toeram-pizahan-tany izay manome fahafaham-po ireo mpizahatany dia iray amin'ny lafiny miantoka ny fahombiazan'ny toeran-tendrombohitra. Fa misy antony hafa koa tafiditra ao, toy ny fitantanana fahalalana, ny kalitaon'ny serivisy ary ny kolotsaina mandray vahiny.
• Ny fampiofanana sy ny traikefa amin'ny oniversite dia azo ampiharina amin'ny hetsika fizahan-tany, ary amin'ity lafiny ity, ny fandinihana sy ny fikarohana amin'ny toerana itodihan'ny tendrombohitra dia nanampy tamin'ny fampandrosoana tontolo iainana maharitra.
• Ny sehatra nomerika vaovao dia tsy maintsy manome fiarovana sy fahatokisana ho an'ny tompona sy ny vahiny. Eo amin'ny sehatry ny fitsipiky ny fampiantranoana, dia nanolotra lalàna vaovao Andorra ary nanasongadina ny tanjony dimy: mamaly ny fihetsiky ny mpanjifa vaovao, manatsara ny fitoviana eo amin'ny vondron'olona, ​​mampihena ny asa tsy misy fahazoan-dàlana ary manamora ny fifehezana ny trano tsy ara-dalàna, ary manatsara ny kalitao sy ny fiarovana ireo mpitsidika. . Ho fanampin'izay, Andorra dia nampiditra ny lazany an-tserasera tamin'ny voalohany ho fepetra vaovao amin'ny fanasokajiana trano honenana.
Ny hotely wharf dia manome anarana ny Tale jeneralin'ny hotely mihaja vaovao, Niccolo Changsha
New York hifoha fahasalamana any Karaiba mandritra ny herinandro nohavaozina any Karaiba
8 minitra lasa izay